Izibalo zikaGoogle zeBusus URL Shortener Statistics | Martech Zone
Sibe neseshoni enomdla kunye nomthengi njengenxalenye yezinye kubahlalutyi uqeqesho kunye nokubonisana esikwenzayo nenkampani yabazali babo. Njengenxalenye yemizamo yabo eqhubekayo, bahambisa iiKhowudi zeQR, bafaka ikhowudi yomkhankaso kaGoogle yokuHlaziya, emva koko ufake ifayile ye- Isifinyezi se-URL kaGoogle, ebavumela ukuba ngokuchanekileyo Linganisa amaqondo okuphendula kwimizamo yabo.
Esi sisicwangciso esomeleleyo. Uhlalutyo lulodwa alunakukubonelela ngayo yonke into oyifunayo ngenxa yazo zonke iinkqubo ezisasaza amakhonkco kule mihla ezingafakwanga idatha ebhekisa kwisicelo. Uhlalutyo uyazi apho uvela khona ngeeseva zewebhu ezixelela iphepha elilandelayo apho iphepha lokugqibela lalikunye nayo yonke ingcaciso kumthengi. Kuba iiapps azinayo iseva yewebhu… abadluli idatha. Ngenxa yoko, uya kufuna ukufaka ikhowudi yephulo kwii-URL zakho ezimfutshane ngaphambi kokuba usasaze. Sibonise nje indlela yokongeza Ikhowudi yokukhangela yeGoogle yokulandela umkhondo kunyeHootsuite kutshanje.
Nangona kunjalo, wafumanisa into eyothusayo… wafumanisa ukuba uGoogle unonqakrazo olwenzekayo ngaphambi kokuba ikhonkco lenziwe! Nabu ubungqina-ngqo kwi-injini yokunika ingxelo yeGoo.gl:
Kwaye khange yenzeke kube kanye… yonke indawo!
Kulusizi ukuba le datha ayinakuthenjwa kuyo… kodwa ayinakuba njalo. Ngokusebenzisa ujongano, awunakukhetha uluhlu lwemihla, ke uKevin kuye kufuneke azitsale ngesandla imouse yakhe kwiitshathi ukuze afake imihla kunye nokucofa ukugcwalisa ingxelo yakhe. Ndiyamangaliswa kukuba uGoogle engabandakanyi nje ukufutshane kwabo kunye noHlahlelo lwabo kwaye babhalise ngokuzenzekelayo amaphulo. Ndothuke ngakumbi, ngalo mhla nakwiminyaka apho kufuneka siphande ngokusebenza kwendawo yethu, yeyiphi impazamo esiyenzileyo!
Ngaba ukhona umntu owaziyo umphathi wemveliso ngapha eGoo.gl onokuchaza oku?
tags: Goo.glIsifinyezo se-url sikaGoogleingxelomfutshane we-url
Gxila ngokunzulu kwiziphumo zakho zoPhando: Umnqamlezo wokuHlaba kunye noHlolo lokuHlunga
Meyi 1, 2016 kwi-5: 35 PM
Ndinengxaki efanayo kanye ngelixa bendizama ukulinganisa impembelelo yamanye amajelo. Kudala ndijonge ukuba izihloko ngokusebenzisa amaqela kaGoogle kunye nezinye iiforum kunye neebhlog kodwa andizange ndifumane nto iluncedo.